Ndekọ Ọnụ Ọdịnaya nke Afọ 2019 | Martech Zone
Chọta ngwa ọrụ nkwado ziri ezi nke na - abughi naanị na - ege ntị ma na - eme njikọ na ndị na - ekiri bụ ihe siri ike. N'ime afọ ole na ole gara aga, ndị ahịa na-elekwasị anya na nke a, na-anwale ma na-etinye ego na ụzọ dị iche iche iji hụ nke kachasị arụ ọrụ. O juru onye ọ bụla anya, ịzụ ahịa ọdịnaya nwere nọmba mbụ na ụwa nke mgbasa ozi.
Ọtụtụ na-eche na ahịa ọdịnaya dị naanị maka afọ ole na ole gara aga ebe ọ bụ na ịntanetị ghọrọ ihe a ma ama n'ụwa niile maka ịkwalite azụmaahịa ozi kachasị ọsọ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị eleru anya nke ọma, anyị nwere ike ịhụ n'ezie na usoro azụmaahịa ọdịnaya abụrụla kemgbe narị afọ nke 19. Ihe ọzọ bụ na ọ nyeworo aka na mmepe nke ụlọ ọrụ dị iche iche.
Lee ihe a:
Ọ malitere na ngwụsị narị afọ nke 19. Ọganihu teknụzụ na nkwukọrịta na njem bụ isi mgbanwe mbụ dị na ọha mmadụ nke nyere ụlọ ọrụ ohere iwulite njikọ siri ike na ndị ahịa ha. Ezigbo ihe atụ nke otu esi eme nke a sitere na afọ 1885 mgbe Onye Furrow Magazin nyere ndị ọrụ ugbo ihe ọmụma na ndụmọdụ banyere otu esi eme ka azụmahịa ha ka mma. Ka ọ na-erule afọ 1912, o nweela ihe karịrị nde mmadụ anọ na-agụchi ya anya.
Ihe atụ ọzọ sitere na ụlọ ọrụ taya French Michelin, nke mepụtara ntuziaka peeji 400 nke na-enye ndị ọkwọ ụgbọala ozi dabere na ndụmọdụ njem na mmezi akpaaka.
Ozi sitere n'akụkọ ihe mere eme na-ekpughe nke ahụ ire ọdịnaya gabigara nnukwu mgbanwe wee tụọ mbido n'isi 1920 mgbe e mepụtara redio. Zụta oge ikuku na ịkwado mmemme a ma ama ghọrọ ụzọ kachasị mma iji kwalite na ịkpọsa. Ọ rụrụ ọrụ dị ebube maka ndị na-ere ahịa bụ ndị ghọtara ozugbo ikike ya n'oge ahụ.
Enwere ike iwere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ihe atụ magburu onwe ya Oxydol Ncha ntụ ntụ, nke bidoro ịkwado usoro ihe nkiri redio a ma ama. Ndị na-ege ya ntị lekwasịrị anya ka ha bụrụ ndị nwunye, ọ bụghị naanị na ụdị a gara nke ọma - ahịa ya rịrị elu. Nke a setịpụrụ ụfọdụ ụkpụrụ ọhụụ na egwuregwu mgbasa ozi, kemgbe ahụ, ihe ka mma.
Ngwa ngwa ngwa rue oge a, ndị ahịa etinyewo uche ha na nkesa ọdịnaya dijitalụ na ịrị elu nke kọmputa, smartphone, na Internetntanetị.
Otu ihe agbanwebeghị, n'agbanyeghị:
Ahịa ọdịnaya bụ otu n'ime usoro nkwado na mgbasa ozi kacha mma. Ndị ahịa na-emepe atụmatụ ọhụrụ, ọdịnaya ọhụụ, na ụzọ ọhụrụ iji soro ndị na-ege ha ntị na-enye ha ọtụtụ ihe ha chọrọ. Mgbasa mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ na-aghọ oghere ọhụụ ọhụrụ, ebe ọ bụ na ndị mmadụ na ọgbọ ọ bụla na-eji ịntanetị eme ihe, ọ dịghị njedebe otu ìgwè na-esote.
O doro anya na ire ahia emeela onyinye di nkpa na ọganihu akụkọ ihe mere eme nke ọtụtụ ụlọ ọrụ. Nanị ihe fọdụrụ ugbu a bụ ịnọdụ ala ma hụ ihe ga-eme na ụlọ ọrụ ijeri dollar a.
Anyị nwere olile anya na ị mụtara ụfọdụ ozi bara uru site na isiokwu a nke ị nwere ike iji mee ihe maka uru gị.
Tags: blọọgụ eziokwuakara kọntaktịnkesa ahịa ọdịnayaakwụkwọ akụkọnwa afọ mgbasa oziọnụ ọgụgụ
Josh Wardini bụ onye nchịkọta akụkọ na onye njikwa obodo na Hostingtribunal. Site na mmalite mmalite na nkwukọrịta na nka na mmepe obodo, Josh na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji megharia njikwa ọrụ mmadụ nke ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọnụọgụgụ.
Nkọwa: Dezie Audio Site Na Transcript